REENOEMANN: မအိမ်ကံ ( For Dec အပိုင်း - ၄)
Posted by Ree Noe Mann at 12:19:00 AM
We can read it online at http://shweamyutay.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1737&Itemid=&ed=56. You can't say it's your post because you didn't even spendasingle effort/ typeasingle word for this article. All you did was copy and paste. Please don't make the web sick with "Duplicate Contents", Dude!
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ ခုလို ကောမန့်ပေးတဲ့ အတွက်ပါ။
ပိုစ့်ကိုသာ ကြည့်ပြီး စာကိုဆုံးအောင်မဖတ်တဲ့
ကျနော်အနေနဲ့ ကျနော်ရေးပါတယ်၊ ကျနော် ဝတ္တူပါလို့
တစ်ခွန်းမှ မပြောခဲ့ပါဘူး။ ပို့စ်ရဲ့အောက်ဆုံးမှာ မှတ်ချက်
ပါပြီးသားပါ။ စာကို သေသေချာချာဖတ်ပြီမှ ကောမန့်ပေးတာ
ခင်ဗျာ အတွက်ကောင်းမှာပါ။ အဲလိုမှ မဟုတ်ရင်ခင်ဗျာရဲ့
ကောမန့်တွေက တန်ဖိုးမရှိဘဲ တစ်ဖက်သာကိုစောကား